Tuesday, July 24, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na ndị ahịa ọ bụla ga-ekwenye na okwu ọnụ ahịa bụ ụzọ dị mma iji nwekwuo ọhụhụ na ire ahịa, ọtụtụ na-efunahụ ụzọ esi edozi okwu mkparịta ụka na-aga nke ọma na Facebook. Nke a bụ ebe Booshaka nwere ike inyere aka. Booshaka na - eme ka okwu mgbasa ozi na - eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị mfe site n’inyere ika ahụ aka ịghọta nke ọma ha ma mekwaa ka mmekọrịta ha na ndị na - akwado ha na ndị na - eso ha.
Booshaka nwere ezi uche nke data Facebook ma na-enye nghọta dị oke ọnụ ahịa ị nwere ike iji maka nchọpụta ọdịnaya na mmepụta, nghọta ndị ahịa, nyocha ahịa, mgbasa ozi mgbasa ozi na njikarịcha, njirimara onye nkwado cross-nkwado na ọnụahịa, nyocha ndị asọmpi, benchmarking, mmesho na ndị ọzọ.
Booshaka na-enye nghọta n'ime ndị na - eso ụzọ ya site na nkọwapụta, mmasị na ọrụ ndị ọzọ. Booshaka gafere nhụjuanya elu ma ọ bụ ọnụnọ iji nye uru maka nkwado onye ofufe dabere na mma na mmetụta. Onye na-ere ahịa na-enweta nghọta banyere stats na-arụ ọrụ yana ọrụ na-adịbeghị anya. Nghọta dị otú ahụ na-eme ka onye na-ere ahịa lekwasị anya n'ụdị ndị ziri ezi ma chọpụta ihe na-adọta clic na ọrụ mgbe ị na-emepe atụmatụ mgbasa ozi na atụmatụ itinye aka
Sample Top Fans Onye ndu:
Booshaka gafere elu clickers. Mgbe isi Top Fan Onye ndu na-enye ụdị akara ngosi banyere ihe na - eme, atụmatụ njikarịcha njikarịcha njirimara na - enyere ụdị aka ịmekọrịta mmekọrịta ma si otú ahụ mee ka ndị na - akwado ya sikwuo ike. Ihe omume Social Rewards na-enye ohere ịtọlite ​​mmemme iji kwụghachi ndị na-akwado ya ụgwọ, na-agbatị ahịa iguzosi ike n'ihe na ohere mgbasa ozi. Ihe ọzọ dị elu, Ndị ọkacha mmasị Pro na-eme ka ịhaziwanye ụba, ma na-enye atụmatụ ndị ọzọ amaghi - gụnyere nke na-enyere aka iwepu spam.
Sample Top Fans Pro Onye ndu:
Booshaka na-enye nkwekọ dị mkpa mgbe ị na-atụle ma na-akọwapụta njikọta ofufe - nke na-enye nghọta miri emi karị n'ime data ahụ. Ntinye ngwa ngwa ma dịkwa mfe, banye na Ndị ọkacha mmasị Booshaka, ihe onyinye bụ isi bụ n'efu. Ọbụna nsụgharị Top Fans Pro bụ n'efu maka ụbọchị asaa mbụ. Agbakwunye ọnụahịa dabere na ọnụọgụ ndị fans ị nwere!
Tags: booshakaFacebookfacebook Fansfacebook nwere mmasịFacebook Marketingihe kacha elun'elu fansọkacha mmasị